Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Indwangu ye-fiberglass yendwangu ye-Acrylic Camera
Indwangu ye-Acrylic fiberglass ilukiwe ngentambo ye-E-ingilazi nentambo ebunjiwe, bese isongwe ngengcina ye-acrylic. Kungaba uhlangothi olulodwa nezinhlangothi ezimbili zokumboza. Le ndwangu iyinto ekahle yengubo yomlilo, ikhethini le-welding, ikhava yokuvikela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangabi elibuyiselwe emuva, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphakeme, ukuvikela imvelo.
Indwangu ye-fiberglass Yokwakhiwa Kwesikebhe
Indwangu ye-fiberglass Yokwakhiwa Kwesikebhe ilukiwe ngentambo ye-E-ingilazi nentambo ebunjiwe, bese ifakwa i-acrylic glue. Kungaba uhlangothi olulodwa nezinhlangothi ezimbili zokumboza. Le ndwangu iyinto ekahle yengubo yomlilo, ikhethini le-welding, ikhava yokuvikela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangabi elibuyiselwe emuva, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphakeme, ukuvikela imvelo.
Indwangu ye-fiberglass 3m
I-fiberglass Cloth 3m ilukiwe ngentambo ye-E-ingilazi nentambo ebunjiwe, bese ifakwa i-acrylic glue. Kungaba uhlangothi olulodwa nezinhlangothi ezimbili zokumboza. Le ndwangu iyinto ekahle yengubo yomlilo, ikhethini le-welding, ikhava yokuvikela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangabi elibuyiselwe emuva, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphakeme, ukuvikela imvelo.
Ingubo kagesi ye-fiberglass Cloth
Indwangu Yokuvala kagesi i-fiberglass Cloth ilukiwe ngentambo ye-E-ingilazi nentambo ebunjiwe, bese ifakwa i-acrylic glue. Kungaba uhlangothi olulodwa nezinhlangothi ezimbili zokumboza. Le ndwangu iyinto ekahle yengubo yomlilo, ikhethini le-welding, ikhava yokuvikela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangabi elibuyiselwe emuva, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphakeme, ukuvikela imvelo.
Corrosion Resistant Fibreglass Indwangu
Indwangu ye-fiberglass Resistant Resistant ilukiwe ngentambo ye-E-ingilazi nentambo ebunjiwe, bese isongwe ngengcina ye-acrylic. Kungaba uhlangothi olulodwa nezinhlangothi ezimbili zokumboza. Le ndwangu iyinto ekahle yengubo yomlilo, ikhethini le-welding, ikhava yokuvikela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangabi elibuyiselwe emuva, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphakeme, ukuvikela imvelo.
Indwangu i-fiberglass ilukiwe ngentambo ye-E-ingilazi nentambo ebunjiwe, bese isongwe ngengcina ye-acrylic. Kungaba uhlangothi olulodwa nezinhlangothi ezimbili zokumboza. Le ndwangu iyinto ekahle yengubo yomlilo, ikhethini le-welding, ikhava yokuvikela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangabi elibuyiselwe emuva, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphakeme, ukuvikela imvelo.
Indwangu ye-Fiberglass eshibhile
Indwangu ye-Fiberglass eshibhile ilukiwe ngentambo ye-E-ingilazi nentambo ebunjiwe, bese isongwe ngeglu ye-acrylic. Kungaba uhlangothi olulodwa nezinhlangothi ezimbili zokumboza. Le ndwangu iyinto ekahle yengubo yomlilo, ikhethini le-welding, ikhava yokuvikela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangabi elibuyiselwe emuva, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphakeme, ukuvikela imvelo.
6mm Wugqinsi fiberglass Indwangu Ishidi
6mm Wugqinsi fiberglass Indwangu Ishidi is aluka E-ingilazi ntambo futhi ntambo textured, bese camera nge acrylic glue. Kungaba uhlangothi olulodwa nezinhlangothi ezimbili zokumboza. Le ndwangu iyinto ekahle yengubo yomlilo, ikhethini le-welding, ikhava yokuvikela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangabi elibuyiselwe emuva, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphakeme, ukuvikela imvelo.
3mm Ubukhulu fiberglass Indwangu
3mm Ubukhulu fiberglass Indwangu is aluka E-ingilazi ntambo futhi ntambo textured, bese camera nge acrylic glue. Kungaba uhlangothi olulodwa nezinhlangothi ezimbili zokumboza. Le ndwangu iyinto ekahle yengubo yomlilo, ikhethini le-welding, ikhava yokuvikela umlilo, ngenxa yokufaneleka kwayo okukhulu, njengelangabi elibuyiselwe emuva, ukumelana nokushisa okuphezulu, amandla aphakeme, ukuvikela imvelo.
Indwangu i-fiberglass, Indwangu ye-Acrylic fiberglass, Acrylic Camera fiberglass, Indwangu Eboshwe Nge-fiberglass Indwangu, Indwangu ye-fiberglass ye-Aluminized, Indwangu ye-Acrylic Camera fiberglass,